Nei muchato wekuenda ungagone kuchengetedza mari uye tsinga
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Vanodanana Michato Honeymoons » Nei muchato wekuenda ungagone kuchengetedza mari uye tsinga
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Beachfront destination wedding at Beaches Turks & Caicos
Kukwezva kwemuchato wekuenda kwakaoma kuramba - rwendo kuenda kune imwe nzvimbo kunze kweyakajairika, uko mwenga nemuroori vanoita kuti kusvetuka kwakakosha uye kwekufananidzira kutanga hupenyu hwavo pamwe chete sevakaroora. Michato yekuenda inozivikanwa nekuda kwezvikonzero zvakati wandei, kusanganisira izvo zvinoita kuti zvive nyore kune vakaroorana kuve nekushamisa, kamwe-mu-mu-hupenyu ruzivo kunze kwemusha. Kungofanana nedzimwewo michato, vakaroorana vanogona kugadzirisa yavo yekuenda muchato kuti ienderane nezvavanofarira, vachikoka vazhinji, kana vashoma vashanyi sezvavanoda. Kunyangwe ivo vari kurota nezve muchato wegungwa, chiitiko chechechi chechivanhu, muchato webindu, an muchato we elopement, kana chimwe chinhu chisingaenderani, muchato wekuenda unopa shiri dzerudo nzvimbo yakawanda yekuunza zvishuwo zvemuchato kuhupenyu.
Chii chinonzi roora rekuenda?
Muchato wekuenda muchato unoitwa panzvimbo iri kuti zvakaringana kuti ruzhinji rwevaenzi vagadzire kuronga uye kubhuka pekugara padyo. Michato yekuenda inogona kuitirwa munyika ruzhinji rwevaenzi vanogara mukati, asi izvi zviitiko zvezviitiko zvinowanzoitirwa kunze kwenyika. Michato yekuenda inowanzoitika munzvimbo isina kujairika, ichisununguka kubva pane zvakajairwa. Sezvo mhemberero idzi dzichiwanzo kuve diki muhukuru, zvichienzaniswa nemichato yechinyakare, michato yekuenda inowanzo kukonzera mutengo wakaderera.
Nei uchifanira kusarudza muchato wekuenda?
Beachfront muchato pa Mahombekombe Turks & Caicos
Kune zvikonzero zvakawanda zvevakaroorana vanosarudza kuita muchato wekuenda, uye chimwe cheizvi ndechekuti chinovatendera kuita muchato mu yekune dzimwe nyika, uye kazhinji nzvimbo inoshamisa, pasina kupaza bhangi. Mari inogona kuchengetedzwa mune dzimwe nzvimbo uye yoshandiswa yakawanda mune vamwe… kana chengetedza zvese zvakakomberedza. Kuva ne maratidziro ekuenda kumuchato semuenzaniso, inokwidza mufaro, uye inopa vaviri vacho marongero emuchato kana murongi anozobatsira kuona kuti zvinhu zvinofamba mushe pazuva. Heano zvimwe zvezvimwe zvikonzero vanhu vanosarudza kuenda kumichato:
Kana vaviri vacho vakasarudza imba yemuchato, ivo havafanirwe kunetseka nezve zvidiki zvidiki uye vanogona kuronga yavo yemuchato zviri nyore kubva kure. Kana vangosvika ikoko, vashandi vemahara vanoona kuti zvese zvinoenda maererano nezvakarongwa, kunyangwe kubatsira kuronga zviitiko zveboka mukati nekubuda munzvimbo yekutandarira.
Vanhu vazhinji vanonzwa kusununguka nemichato yekuenda, sezvo kazhinji muzviitiko kuronga kuri kusiirwa kwavari, na zvishoma zvekubva kushamwari uye mhuri. Kuroora kwekuenda kunogona, mune dzimwe nzira, kufananidzwa nemichato yekukwazisa mukuitwa kwavo, asi zvakazara, aya mazano maviri akapatsanuka. Verenga iyi blog nezve kuronga nezve elopement muchato pano: Maitiro Ekuronga Iyo Elopement Muchato: Yekupedzisira Yekutarisa.
Vashoma vashanyi vanoreva kurerutsa mari, uye ndiwo mukana mukuru wevakaroorana vari kutsvaga mari, asi yakakosha, sarudzo yemuchato. Resorts seSandals inopa ese-anosanganisira mapakeji, mamwe acho anosanganisira muchato wakasununguka sechikamu chekugara, kana vaviri vacho vakasangana nezvinodiwa zvehuwandu hwehusiku uye / kana nzvimbo dzekubhuka.
Muchato wekuenda unobvumidza vaviri vacho ku vane muchato uye honeymoon mune imwe, inova hombe yekuwedzera, uye chiitiko vane chokwadi chekunakidzwa nacho.
Kunyangwe nezvose izvi mabhenefiti, michato yekuenda haisi chete yemunhu wese. Vakaroorana vanoda kukoka vanhu vazhinji, asi vasingade kunetsekana mune zvemari maererano nehuwandu hwevanhu vanopinda, vangangoita zvirinani nekusarudza kwetsika. Vakaroora vasina nguva yakawanda yekusiyira pazororo, uye avo vane zvimwe zvisungo zvemhuri zvakare vangangodaro vasina kuwana muchato wekuenda kuti uve sarudzo yakanyanya kunaka. Zvakadaro, kana vaviri vacho vakwanisa kuenda, uye nekuita nguva yacho, zvinogona kunge zviri chimwe chezviitiko zvakanakisa zvehupenyu hwavo.
Nzira yekuronga kuenda kumuchato?
1. Nyora pasi
mufananidzo neruremekedzo rwaDean Drobot kuburikidza neshutterstock
Kutanga kubva pakuronga muchato, tanga wagadzira yekutarisa. Izvi ndizvo chaizvo muchato ku-do rondedzero iyo ichabatsira kufambisa zvinoda kuitwa, uye riini. Kana rudzi rwemuchato rwasarudzwa, vaviri vacho vanozokwanisa kuunganidza zvinhu nekukasira pamwe nerondedzero yemuchato.
Insider zano: Kuronga muchato wegungwa? Heano akakosha ruzivo: Kuroora Kwepagungwa: Kufuridzirwa, Zviitiko & Matipi kubva kune Nyanzvi.
Mufananidzo wakakomberedzwa ne nutcd32 kuburikidza neshutterstock
Muchato wekuenda dzimwe nguva unogona kudhura pane mhemberero padyo nemusha. Kuchengetedza mari pamuchato wekuenda, iyo chakakosha chinhu kuisa pamberi. Kuziva izvo izvo vaviri vasingazoshandise pane kuchaita kuti vazive kuti yakawanda sei imba yavanayo mune dzimwe nzvimbo kuti vashandise yakati wandei. Mari inogona kuchengetwa pazvinhu zvakaita semaruva, nekupa iyo florist kamuri kuti isarudze pakati pemaruva eakafanana mavara kana mumvuri, pane kusarudza iyo imwechete maruva mhando, iyo inogona kunge ichidhura. Zvese uye zvese, nzira yakanakisa yekuchengetedza mari ndeyekutenga-tenderera!
3. Sarudza wekukoka
Usati wapenga nevakoka, tanga wafunga nezve bhajeti, uye kuti uchave wakakura here kana mudiki muchato. Kana danho rikaitwa kuti uve nemuchato wekuenda, shamwari neshamwari nenhengo dzemhuri dzinozokwanisa kuenda kunzvimbo yako yechiitiko ichi chinofanirwa kutariswa, pamwe nekuti zvinotora nguva yakareba sei kuti vasvike ikoko kana vachidaro. Mutemo wakanaka wechigunwe wekuenda kumichato ndeyekukoka vanhu vanonyanya kukosha vanozoita hunhu hwakanaka pazuva nekuvapo kwavo. Kana vanhu vashoma vakatemwa kubva pakurongwa, usanetseke zvakanyanya nekuti mabiko kwavari anogona kurongerwa kana vaviri vacho vadzokera kumba.
4. Sarudza kwekuenda & nzvimbo
Pamusoro-iyo-mvura chapel, inowanikwa pa Shangu dzekuSouth Coast
Nhanho yekutanga ndeyekusarudza kwekuenda kwaizokodzera mukati mebhajeti yevaviri, pamwe nebhajeti revashanyi vakanyanya kukosha.
kushanya 'Kunze kwekuenda kumuchato nzvimbo mazano' kuti uwane kurudziro!
Mushure mekusarudzwa kwekuenda, chinomira chinotevera ndiyo nzvimbo. Funga nezvekuti mhemberero iyi ichaitirwa kupi, uye kupi kugamuchirwa / pati kuchave. Izvi zvinogona zvese zviri zviviri nzvimbo imwechete. Funga nezve akasiyana maficha ekuisanganisira, sebhawa semuenzaniso. Chichava bhawa rakavhurika, uye ndedzipi mhando dzezvinwiwa uye zvekudya zvemunwe zvinozopihwa? Vamwe vanhu vanoburitsa zvese zvamira panhau iyi, vachipa vaenzi zvakawanda zvekusarudza, nepo vamwe vachienda kumazariro vasina doro. Sarudzo iri kune vaviri!
Nyanzvi zano: Haudi kunetseka nezvemarii yaunoshandisa pane zvekudya nekumwa zvevaenzi? Gadzirira muchato pa yose-inosanganisira resort uko kwese kudya uye (zvidhakwa) zvinwiwa zvinosanganisirwa!
Dzimwe nzvimbo dzisingaenderane dzinosanganisira a muchato wesango, mhemberero pa imba yega kana villa, nzvimbo yekutandarira, kana pamhenderekedzo yetropiki (kazhinji vaviri vaviri vekupedzisira pamwechete). Vamwe vakaroorana vanotosarudza matongo, makabheji, matura, uye matura senzvimbo yavo yemuchato. Imwe sarudzo inoshamisa pamwe wanga usina kumbofunga nezvayo, ndeimwe yemasandari 'pamusoro pemvura machechi.
Kuti uwane kumwe kufemerwa kunzvimbo dzemuchato, enda ku '8 Kwakawanda Kunoenda Kuroora Kuroora Zviitiko muCaribbean'.
5. Gadzira runyorwa rwemapepa anodiwa
mufananidzo nerubatsiro rweafrica studio kuburikidza neshutterstock
Mamwe magwaro akajairika anodiwa kumuchato wekuenda kunosanganisira gwaro rekuzvarwa uye pasipoti, humbowo hwekurambana kana gwaro rekufa (kune vakarambana), shanduko yemazita magwaro, mvumo yakanyorwa yemapati ari pasi pegumi nemasere, uye rezenisi rekuroora.
Kune dzimwe nzvimbo uko vaviri vacho vachazoda gara pekugara usati waroora. Muzviitiko zvakawanda izvi zvinogona kuitwa Mukati me 48-72 awa yekugara nguva. Tarisa kuti muchato unozozivikanwa sepamutemo here munyika yaunogara. Kune dzimwe nzvimbo, vakaroorana vanofanirwa kuve vezera repamutemo rekuroora kana kuve nemvumo kubva kuvabereki vaviri kana vari pasi pemakore makumi maviri nerimwe.
6. Sarudza kuti ndiani acharoora vaviri ava
Friends inogona kushandira muchato mune dzimwe nzvimbo. Izvi zvinogoneka zvachose - ingoita ongororo mukati medunhu rinozoitirwa muchato kuti uone kana izvi zvichizoshanda uye sei. Vamwe vakaroorana vanoita izvi kuchengetedza mari uye kuita kuti muchato wavo uwedzere kukosha. Zvikasadaro, munhu anozivikanwa anoshanda kuti ave nechokwadi chekuti mhemberero dzakanyoreswa zviri pamutemo zvakakwana.
7. Tumira mapepa ekukoka!
mufananidzo neruremekedzo rwevbstudio kuburikidza neshutterstock
Vamwe vakaroorana vanosarudza kuisa mepu yenzvimbo yacho mune yavo yekukoka. Izvi zvakanaka kana muchato uchiitika kunzvimbo iri kure. Funga nezve kana iko kukoka kuchizogadzirwa kana kana chimwe chakafanogadzirwa chichatengwa. Tumira vanokoka kunze nekukurumidza sezvinobvira, kuti vashanyi vakwanise kuchengetedza gadziriro yavo yekufamba uye vawane nguva yekuzorora.
8. Sarudza theme & color scheme
Kana vaviri vacho vaine hunyanzvi hwekubata, kana ivo vachiziva zvavanoda, kusarudza theme uye color scheme zvinouya zviri nyore, zvikasadaro zvingave zvakanaka kusiira izvi kune anoronga nezvemuchato, uchivapa mazano ezviri kudiwa semhedzisiro . Kana vashanyi vachizopfeka zvinoenderana neimwe tema, kana kupfeka rimwe vara, sanganisira izvi mumakadhi ekuchengetedza-iwo-zuva kana epamutemo emuchato.
mufananidzo neruremekedzo rweMila drumeva kuburikidza neshutterstock
Chiratidzo chekugashira ndechimwe chezvinhu izvo zvinogona kuve zvinoenderana nevakaroorana, izvo zvinobatsira vashanyi kuti vanzwe kugamuchirwa kana vasvika. Uku kubata kukuru kwemuchato wekuenda sezvo uchibatsira kuunza vanhu pamwechete uye nekunzwa kugadzikana.
Nzvimbo dzemakadhi dzinonakidza nekuti dzinogona kugadziridzwa kuti dzikwanise dingindira. Izvo hazvitombo fanirwa kuti zvinyorwe papepa; vamwe vanhu vanoshandisa mashizha, napkin, uye zvimwe zvinhu kuita izvi nakisa kunakidzwa.
Maruva anowanzo kuve chikamu chikuru chemichato asi haafanire. Zvisinei, kana maruva akabatanidzwa, funga kana muchato uchange uri mumba kana kunze. Nemichato yegungwa semuenzaniso, maruva pane anogona kumira kupisa uye pamwe nemhepo inoda kusarudzwa.
Makeke anozivikanwa, asi zvakare achiri kusarudza. Keke hombe kana rakajeka rinogona kusarudzwa kana paine sarudzo yemakeke anoshongedzwa zvakanaka. Chero nzira, zviri zvachose kune vaviri vacho uye kuti keke inosunga sei munzvimbo yacho. Funga kana paine nzvimbo yekuchengetera keke kana ratemwa, sekusiya kunze kwezuva kwenguva refu hazvikurudzirwe. Kana uchiroora kunze, ita kuti mugadziri wekeke ashandise zvinoshandiswa zvinomira kuzuva kune icing. Kana uchigara panzvimbo yekutandarira, tsvaga kana keke rakabatanidzwa mune yekuenda muchato package.
9. Chengetedza magariro
Seashell seating kuronga gungwa muchato pa Mahombekombe Negril
Chati yekugara, kana makadhi enzvimbo akanyatsorongedzwa (kana ese ari maviri), anobatsira munhu wese kugara pazvigaro zvemhemberero Tora mepu yenzvimbo yemuchato, pedzai imwe nguva muchifunga kuti ndiani anofanira kugara kupi, uye dhizaini chati kana makadhi enzvimbo anoenderana nezvimwe zvinhu zvemuchato.
10. Ronga chikafu nezvokunwa
Pamuchato wekuenda, vakaroorana vachada kuona kuti pane zvekudya zvevanhu vese. Bvunza nezve zvaunofarira panguva yeRSVP maitiro uye tsvaga nezve allergies; iyo menyu inogona kutogovaniswa pamberi. Vazhinji vanodyisa vanobhadharisa pamunhu, saka chengeta izvo mupfungwa kana uchiisa pamwechete runyorwa rwevaenzi. Ronga muchato pane ese-inosanganisirwa nzvimbo, uye izvo zvinotora kunetseka nezve chikafu uye zvinwiwa kubva pane izvo zvinyorwa.
Verenga zvakawanda pamusoro mamenu emuchato kuSandals (mamenyu anouya nebasa rekuzvipira kuboka).
Verenga zvakawanda pamusoro nzira dzekudyira dzakatoverengerwa paSandals.
11. Gadzira chipo / kadhi bhokisi
mufananidzo nerubatsiro rwe seeshooteatrepeat kuburikidza neshutterstock com
Ino inzvimbo yakakwana yevashanyi kusiya zvinonaka manotsi, makadhi ezvipo, uye zvimwe zvidiki zvidiki. Isa bhokisi iri munzvimbo yakachengeteka, inova zvakare nyore kuona kana vashanyi vapinda. Siya munhu anobva kumuchato anotarisira nzvimbo ino, saka munhu wese anopinda anoziva zvinoenda kupi. Munhu uyu anokwanisa zvakare kuisa bhokisi kure kumwe kuchengetedzeka kana mari dzese dzaitwa.
12. Hire anoshamisa mufananidzo.
Mifananidzo yemuchato hafu yekunakidzwa, uye vakaroorana vanofanirwa kuronga bhajeti neizvi. Funga nezve kana paine nyanzvi (yakakurudzirwa), kana kana iri basa richigona kuitwa nenhengo yemhuri kana shamwari. Mazhinji maresort anopa sevhisi iyi, mamwe nemutengo wakawedzerwa. Udza mutori wemifananidzo zvisati zvaitika mhando yemifananidzo yaidiwa uye kuti anofanirwa kuve sei mukutungamira mapfuti.
Michato yekuenda yakaitwa nyore
Vaviri vachinakidzwa nezuva remuchato pa Shangu Ochi
Kuronga kwekuenda muchato kunogona kunetsa, asi aya matanho anobatsira anogona kubatsira kugara pamusoro pezvinhu, pamberi pechiitiko chemuchato. Kuronga yese-inosanganisira yemuchato yemuchato kuSandals? Rega avo vanoronga zvemuchato vagadzirise vabatsire. Fonera 1-877-263257.
IATA inotangisa pasi rose Mobility Aids Action Group